Nin sameeyay qiyaamo aanan hore loo sameyn
Nin sameeyay qiyaamo aanan hore loo sameyn	Last Updated on Friday, 30 November 2012 11:20	Friday, 30 November 2012 11:08	Ukraine waxay gaaska ka qaataan Ruushka. Intii ay heshiiska ku jireen, dhowr jeer ayuu gaaska kor u kacay. Ukraine arintaas waa ka xanaaqday. Is qab qabsigooda wuxuu gaaray heer caalami ah.
Kor u kicida gaaska waxay Ukraine ku macneeyeen in iyaga lagu ciqaabayo. Ukraine waxay codsadeen in ay ka mid noqdaan union-ka Yurub. Ruushka arintaas waa ka soo horjeedaa.
Ukraine waxay hadda heshay shirkad Spain ah oo gaaska ku siineysa lacag aad uga jaban tii Ruushka. Reer Ukraine aad ayay ugu farxeen in ay helaan gaaskan jaban. Waxay kaloo ku farxeen in ay mar ka baxaan gacanta Ruushka.
Maalintii heshiiska la kala saxiixanayay, live ayaa looga soo daayay Ukraine. Culeyska uu lahaa heshiiska waxaa laga garanayay waxaa Ukraine u saxiixay oo joogay Ra’iisal Wasaaraha Ukraine, dhanka shirkada Spaina waxaa u saxiixay nin la yiraahdo Jordi Bonfehi.
Cilad yar ayaa dhacday. Markii heshiiska la shaaciyay oo dunida loo sheegay, oo Ruushka lagu yiri ka dabaalo saaxiib, ayaa waxaa soo hadashay shirkadii Spain. Waxay yiraahdeen ma naqaano sheekadan aad wadaan. Waxay tilmaameen in aysan jirin wax heshiis ah oo ay la saxiixdeen Ukraine.
Sheekada haddii lasoo gaabiyo, Ukraine waxay ogaatay ninkii la saxiixday heshiiska gaaska raqiiska ah oo ay la fariisiyeen Ra’iisal Wasaarahooda, live-na looga daawanayay Ukraine in uu ahaa tuug aanan weligiis u shaqeyn shirkadaas.
Waxaa la sheegay in madaxweynaha Ruushka Putin uu u qoslay si uusan weligiis u qoslin. Back to Top